Imibhalo Yezingane Yezempilo eCatania
Ukuzilibazisa nokuzilibazisa - Ezempilo nobuhle
Konke ezinganeni zakho
Inhlanzeko ngo-Nizzeti 143 a Catania isitolo esithengisa izinto zezempilo Abbigislo ngayinye izingane e Amathoyizi. Zonke izici zokuphila kwezingane zakho zibalulekile ku Inhlanzeko, Ukufakwa kwamandla kufakiwe.
Ezempilo eCatania - Zilungele Ubuntwana Basekuqaleni
Inhlanzeko yinkampani eneminyaka neminyaka yokusebenza emkhakheni wezindatshana zokuhlanzeka, okwenza kube yiphuzu okubhekiselwa kulo Catania: abasebenzi bayo abaqeqeshiwe bayakwazi ukukunikeza izeluleko ezinhle kakhulu nemikhiqizo engcono kakhulu ngamanani ashibhile, kusuka ekuhlanzeni ukusula kuya kwimikhiqizo yeChicco. Ngaphezu kwezidingo eziyisisekelo, kukhona nezinto Abbigislo ngayinye izingane lemikhiqizo iMignolo, Dodipetto neDisney e Amathoyizi ukwanelisa ngokuphelele zonke izidingo zengane nengane ekhulayo futhi efundayo.
Ezempilo eCatania - Konke ngamaholide
Inhlanzeko ku-Nizzeti a Catania indawo ongayithola Abbigislo ngayinye izingane emaphathini, njengezingubo zekarisini. Futhi hhayi lokho kuphela: namasokisi agcwele amaswidi weBefana e amathoyizi. Okwephathi ekhethekile a Catania, bheka izindatshana eziningi ezitholakala ku-Healthcare. Uma uphelelwa yimibono, Ezempilo eCatania ilungele ukukusiza uphume! AmaFestoons. Amabhaluni we-Disney-themed, ama-tablecloths, amapuleti, izingilazi nokunye okuningi noma ezinye izinhlamvu ezithandwa ngabancane ngokuthola iphathi emnandi nethandekayo!
Ukunakekelwa kwezempilo eCatania - Ukudla
Izingane, uyazi, ziyahaha. Lapha ngoba Inhlanzeko ucabange konke: ngenkathi umatasa uthenga izingubo ngayinye izingane futhi izingane zakho zinesithukuthezi, ungaziphanga ngamaqanda, ama-chip, i-chupa chupa, ushokoledi nokunye. Noma ubaphazamise ngesaba soswidi ngoba kufanele uthenge onkulunkulu ngasese amathoyizi ngoKhisimusi noma usuku lokuzalwa futhi ufuna ukuba isimangale. Ngaphezu kwalokho, kusobala, emikhiqizweni ethile yokudla yokudla okunempilo futhi okwikhulisayo. Noma ngabe yisiphi isizathu, a Catania kunokukhetha okuningi ngokudla kwezingane zakho, ngisho neminyaka yokuqala yokuphila, kubandakanya nokudla kwengane. Thatha ugxume ungene Inhlanzeko.
Imibhalo Yezempilo yezingane eCatania - Amathoyizi amahle
Esitolo Inhlanzeko ngo-Nizzeti 143 a Catania uzothola eziningi amathoyizi lokho kuzojabulisa izingane zakho. I-Plush, imidlalo yabalingiswa bekhathuni abadume kakhulu okwamanje futhi konke izingane zakho ezikufunayo kutholakala Inhlanzeko, okungathengisi nje kuphela izingubo ngayinye izingane. Kuyokumangaza ngokunaka kwayo izindaba nokuvuselelwa njalo. Izame ngokwakho Ezempilo eCatania.